Maalin: Janaayo 22, 2013
RaillyNews News Site ee Ingiriisiga
RaillyNews, oo qayb ka ah Özen Media Group, ayaa kugu wargelinaysa horumarka ka socda nidaamka tareenka adduunka ee Ingiriisiga. Rayhaber akhristayaasha iyo la wadaagga adduunka. Dhammaan noocyada madbacadaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah [More ...]
Sawirrada xiisaha leh ee Magaalada mitir ku yaal Magaalada Beijing qaarkood Fist-by-fist, qaar waxay rabeen inay mar kale ka baxaan tareenka dhulka hoostiisa. Muuqaalka foorar ku dagaallama dhulka hoostiisa ee caasimadda Shiinaha ee Beijing [More ...]
Shil aad u ba'an oo mareenka | Russia (Video)
Shil aad u xun ayaa ku dhacay wadada tareenka Intii uu isku dayey inuu ka degto tareenka dhulka hoostiisa mara ee caasimada Ruushka ee Ruushka, si lama filaan ah ayuu howlgab uga noqday da’da 63-sano jir ah Ivan Houdini, albaabka ayuu ku dhacay, wuxuu ku dhintay siyaabo masiibo ah markii gaadhigu dhaqaaqay.
Isbaarooyinka Basaska Badda ee Bursa
Basaska Bursa Badala Weydiinta Duullimaadyadeena Duulimaadyadeena waxay ka bilowdaan 24 Janawari. Saacadaha Dalxiis; 07: 00 15 30 10 00 18 00 XNUMX XNUMX XNUMX Safarka celceliska [More ...]
RayHaber 22.01.2013 Warbixinta Shirka
Saar qabsasho Dhammaystir Taariikhda Dhabarka Daboolka ah ee Boltka 8 (TÜVASAŞ)
DLH ayaa oggolaaday xariiqa T2 Tramway ee Yalova Road | Bursa
DLH waxay ogolaatay khadka T2 Tramway wadada Yalova ee Bursa; Tallaabooyinka la qaaday si loo fududeeyo qulqulka taraafikada magaalada iyo in la bixiyo gaadiid casri ah, raaxo leh oo deg deg ah ayaa hadda lagu daray mid cusub. Khadadka T1 [More ...]
Himilada Metrobüs ee hillaacyada 'Metrobus', hillaac waa goobta jacaylka. Kadıköylü oo da 'yar ayaa ka sheekeynaya sida uu ugu jecel yahay inuu la kulmo gabadha uu ku howlan yahay… Waxaan ku noolahay Kadıköy waxaanan maamule ka ahay dukaan ku yaal xarunta dukaamada ee Levent. Sidaa darteed, mid kasta [More ...]
Jidadka tareenka labaad ayaa iftiin u ah
AK Party Aydın 46 waa safka labaad ee tareenka. Kulankii Golaha La-talinta Gobolku wuxuu ka dhacay Xarunta Dhaqanka Hidayet Mr. Hall. Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarinta (AK Party) Aydın Ku-xigeenka Mehmet Erdem, [More ...]
Estram iyo tareenka silkworm
Joornaallada Estram iyo silkorm - yada joornaalada iyo buugaagta Demiryol İş waxay ii yihiin ilo macluumaad wacan. Bogag dhawr ah, horumarkii ugu dambeeyay adduunka ee tareennada xawaaraha dheereeya leh iyo nidaamyada tareennada magaalo-tareenka ayaa la qaban karaa. [More ...]
Olympos Teleferik waxay kaqeyb qaadan doontaa EMITT Fair Olympos Teleferik oo kamid ah xarumaha ugu caansan dalxiiska kala duwan ee Kemer, Antalya, 24-27 2013 inta udhaxeysa Janaayo 17 waxaa lagu qaban doonaa Dalxiiska Caalamiga ah iyo Carwada Safarka [More ...]
Tareenka ugu dheereeya adduunka PARIS - TGV, Paris-Strasbourg line rikoor isku day ah inuu isku dayo, wadada tareenka ugu dhawaan 15 daqiiqaddii daqiiqaddii xawaaraha 574.7 km ayaa gaadhay. TGV sidaas darteed waxay sameysay 1990 waqti isku mid ah sida 515. [More ...]
Mashruuca Discovery Channel Marmaray
Khadka daahfurka Mashruuca Marmaray: Sida aan ognahay, Marmaray waa mashruuc seddex geesood ah oo horumarineed oo kuyaala xaafadaha magaalada, aasaasiyadooda waxaa lagu dajiyay 2004 waana ay socdaan waxaana ay isku xiri doonaan dhinacyada Yurub iyo Aasiya ee hoos yimaada Bosphorus. [More ...]
Sakarya ayaa go'aamin doona magaca nidaamka tareenka magaalada Sakarya Duqa Magaalada Caasimadda Zeki Toçoğlu ayaa ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan sahan ku saabsan magaca nidaamka tareenka magaalada, shacabka muwaadiniinta nidaamka ayaa go’aamin doona magaca. Sawirka Dawlada Hoose ee Magaalada Sakarya [More ...]
Erciyes Ski Center 175 sintimitir oo qoto dheer barafka gaartay xarumaha dalxiiska jiilaalka ugu muhiimsan ee Erciyes Ski Xarunta Turkiga waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa sentimitir 175 ee dhumucda barafka gaadhay. Faa'iido ayaa hirgeleysa usbuuca dhammaadka [More ...]